Ahoana ny fomba hanokafana rakitra ePub ao amin'ny iBooks nefa tsy mampiasa iTunes? | Vaovao IPhone
Ny andro lasa izay, manavao ny iBooks i Apple, iray amin'ireo rindranasa izay nanana endrika hafa ary tian'ny olona izany. iBooks dia ny rindrambaiko novolavolain'i Apple ho an'ny iDevices hahafahany mankafy mamaky boky amin'ny fotoana malalaka ananantsika. Ankoatr'izay, tamin'ny fanombohan'ny iBooks Mpanoratra ao amin'ny Mac App Store, mahatalanjona ny zavatra niainan'ny mpampiasa izay azontsika atao. Fanavaozana ny app tsy dia noraisin'ny mpampiasa izany satria nofoanana ilay famolavolana nolazaiko teo aloha ary nahitana endrika vaovao tanteraka, nofaritan'ny mpampiasa sasany hoe: "toerana fotsy izay toa mankaleo kokoa ny zava-drehetra" na "aretin-tsaina misy rindrina fotsy". Ary marina daholo ireo hevitra ireo. Androany dia hampianatra anao izahay ny fomba fanokafana rakitra ePub (boky na antontan-taratasy) ao amin'ny app iBooks anay tsy mampiasa iTunes amin'ny fomba tena tsotra. Te hianatra ianao? Mamaky hatrany!
Manokatra fisie EPUB avy amin'ny mailakao
Iray amin'ireo fiasa tiako indrindra momba iBooks ny mifanentana endrika lehibe Manaiky toy ny: PDF sy ePub izy, izay ny endrika izay ampiasaiko indrindra amin'ny faran'ny andro. Fony aho naka ny iPad voalohany dia tsy maintsy nanao fikarohana kely hianarana ny fomba fanokafana rakitra ePub nefa tsy manokatra iTunes ary ankehitriny, hasehoko anao ny fomba fanaovana azy. Ho an'ity dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto izahay:
Ny ePub izay tianay ampidirina amin'ny iBooks dia tsy maintsy alefaso amin'ny alàlan'ny mailaka na ampidino avy amin'ny pejy rehetra. Eto no hanaovantsika azy amin'ny alàlan'ny paositra.
Raha vantany vao misokatra ny mailaka dia tsy maintsy manery mandritra ny fotoana fohy eo amin'ny kisary fampiharana an'ny iBooks (ahoana no ahafahantsika manamarina)
Ny rakitra nalefako dia a .ePub noho izany dia tiako ny manokatra azy amin'ny fampiharana iBooks, noho izany dia tsy maintsy tsindrio ny kisary fampiharana; fa Mail dia manolotra antsika ny fahafahana manafatra ilay fisie amin'ny rindranasa hafa toa ny Dropbox.
Fanazavana fanampiny - !!Farany!! Apple dia nanavao ny iBooks
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba hanokafana rakitra ePub ao amin'ny iBooks nefa tsy mampiasa iTunes?
axel foli dia hoy izy:
Manana fisalasalana amin'izay rehetra hazavainao aho… Rehefa manokatra boky izay nalefa tamiko tamin'ny alàlan'ny mailaka aho dia sokafako amin'ny iBook, marina ny zava-drehetra, ny olana dia rehefa ampifanarahiko amin'ny iTunes dia tsy mijanona ao amin'ny iTunes izany. , satria toa iTunes ihany no mamonjy ireo novidina tao amin'ny fivarotany. Marina ve izany? Sa sendra ahy io? Misy ve ny vahaolana amin'izany? Ahoana no anaovana izany amin'ny tranga toy izany?
Mamaly an'i axel foli
Raha ny amiko, ireo zavatra ananako ao amin'ny iBooks Store dia mampifandray ny tranombokiko iTunes nefa tsy manao zavatra hafa ankoatry ny Syncing.
Eny fa tsy azonao ny ahy. Andao hojerentsika, raha namoaka boky ePub tamin'ny iPad iray ihany aho, avy amin'ny browser, rehefa nosokafako izy dia afaka misafidy ny hanokatra azy amin'ny iBook, satria sokafako eo izy ary milamina ny zava-drehetra ... fa rehefa ampifandraisiko amin'ny iTunes, TSY hitranga izany amin'ny fampifanarahana amin'ny tranomboky. ..Fa? Izay no tiako ho fantatra.
Reis Carme Aparicio Peláez dia hoy izy:
Mitovy tanteraka amiko izany. Ny boky VONJENo AVY AMIN'NY TRANO-nao ihany no mifandrindra. Tsy nisy izany teo aloha, fa miharatsy atolotry ny fanavaozam-baovao farany. Tsy misy vahaolana. Ity rindranasa ity dia mampifangaro ireo boky novidiana tao ihany, vita ny fanaovana ebook an-tsoratra miaraka amin'ny pejy ary afaka manana azy ireo amin'ny fitaovana rehetra.
Valiny tamin'i Reis Carme Aparicio Peláez
"Fifanarahan-kevitra lehibe amin'ny endrika izay ekeny toy ny: PDF sy ePub" Fampifanarahana tsara ny endrika ve izany? Hahaha
Valiny tamin'i Jose Garcia
Tsy afaka manao fanangonana bebe kokoa ao amin'ny iBook aho, rehefa tsindrio ny + fanangonana vaovao dia tsy nipoitra ny kitendry
Misy olona afaka milaza amiko ve ny fomba nanaovana azy ireo?
Ami dia hoy izy:
Efa nataoko foana izany araka ny fanazavanao azy, fa izao dia manaraka ny dingana rehetra aho ary tsy misokatra amin'ny fampiharana izany. Hisy olana ve amin'ny fanavaozana farany?
Valiny tamin'i Ami
Beatriz Mpitandrina dia hoy izy:
Azavao fotsiny fa ny mailaka handefasana azy dia ICLOUD, tsy fantatro ny format EPUB avy amin'i GMAIL sy avy amin'ny ICLOUD ho azy. MISAOTRA ANAO!
Valiny tamin'i Beatriz Pastora
Salama, manao ahoana ianao ... rehefa manokatra ny ibook aho dia mikatona ho azy, fantatrao ve izay mitranga?
Cami tra dia hoy izy:
Salama… Te hahafantatra ny fomba hamahako olana amin'ny ibooks aho izay milaza amiko »tsy azo hosokafana ny antontan-taratasy» izany dia miseho amin'ny boky pdf misaotra
Mamaly an'i Cami tra
amaira dia hoy izy:
Nivoatra ho 9.1.3 aho ary tsy afaka manokatra ny boky amin'ny ibook… koa, mijanona tsy hidina amin'ny Internet intsony izy io… sendra olon-kafa ve izany ???
Mamaly an'i amaira
Salama, afaka misy manazava amiko ve ny antony ao amin'ny iBooks rehefa misintona boky aho dia mahazo ity fitenenana ity :: tsy azoko entina satria tsy hita ilay loharano nangatahina. Ary avy any dia tsy afaka mamoha azy aho. Inona no tokony hataoko?
Te-hamindra ny .epub avy any Ibooks amin'ny mpamaky KOBO aho. Alohan'ny hanavaozan'ny iBooks dia vitako izany, izao dia tsy mamela ahy. Misy vahaolana ve?
Apple dia mampihena ny fepetra takiana mba hanomezana ny iPhone taloha sy hahazo fihenam-bidy amin'ny iPhone vaovao anao rehefa lena
MOGA Ace Power Video Controller ho an'ny iOS 7 Azo alaina izao